UGAAR AH RAGGA: 6 Tilmaamood Oo Lagu Garto Haweeneyda Daacada Iyo Garabka Kuu Ah - Aayaha
UGAAR AH RAGGA: 6 Tilmaamood Oo Lagu Garto Haweeneyda Daacada Iyo Garabka Kuu Ah
Waxaan idiin soo gudbineynaa 6 calaamadood oo ay leedahay haweeneyda daacada iyo garabka u ah seygeeda. Gabadha noocaan ah waxay leedahay sifooyin ay uga duwantahay mida aanan daacad iyo garab kuu ahayn.
Wax mid walbo kugu qaadata
Lamaane dhabarkaaga taagan waxay kugu qaadaneysaa sida aad tahay, lamaanahaas oo kale kuma dareensiinayso inaadan ku habooneyn mana kula meel dhigayso kuwo kale.
UGAAR AH RAGGA: Xaas Wanaagsan Ayaad Heshay Haddii Ay Leedahay Sifooyinkaan
9 Calaamadood Oo Lagu Garto Inaad Noqon Doontid Xaas Wanaagsan
Kuma dareensiinayso inaa tahay mid nasiib xun, lamaane daacad kuu ah oo ku garab taagan waxay kugu jeclaaneysaa sida aad tahay oo ilaahay (SWT) kuu abuuray.
Waqti ayay kuu sameyneysaa
Haweeneyda daacada kuu ah kuna garab taagan waqti ayay kuu sameyneysaa mar kasta; haweeneydas oo kale kama maqleysid mashquul Ayaan ahay iyo wax lamida, kaama mashquuleyso xittaa hadeey ku jirto waqtigii mashquulka.
Lamaanahaas ku garab taagan waqti qaas ah ayay kuu sameyneysaa.
Warkaaga ayay maqshaa
Lamaane daacad kuu ah isla markaana ku garab taagan waxay dhageysaneysaa hadalkaaga iyadoo dareen ku siineysa. Adiga ayay kula tashanee marka ay go’aan qaadaneyso wayna kula soo xiriirtaa mar kasta.
Gabadha ku garab taagan waa tan had iyo jeer aragta qiimahaaga isla markaana ku faraxsan inay ku heshay, aad ayay ugu mahdisaa inay nolosha kugu heshay.
Waa mid had iyo jeer kuu heelan
Tani waa dabeecad qaas ah oo ay leedahay haweeneyda ku garab taagan isla markaana daacadda kuu ah. Haweeneyda garabka kuu ah waa tan had iyo jeer diyaar kuu noqota kuna taageerta waqtiyada xun iyo kuwa wanaagsan, xittaa marka ay dadka kale gacan ku siineyn.
Waaxay dadaal walba ku bixisa in xiriirku shaqeeyo
Lamaane daacad kuu ah kuna garab taagan waa mid ay ka go’antahay in xiriirka uu shaqeeyo; lamaanaha noocas ah waa mid aanan la helin waxayna dadaal badan maalin walba galineysaa in xiriirka uu noqdo mid aad u wanaagsan.
Haweeney kasta waa inay noqotaa noocaan si xiriirka iyo guurka u nqodaan kuwo wanaagsan oo aanan burburin.
Ma leedahay lamaane noocaan ah? Waa inaad aad u xushmeysaa oo aad ilaalisaa gabadha noocaan ah.
UGAAR AH DUMARKA: 5 Waxyaabood oo ku saabsan ninkaaga ha u sheegin saaxiibadaa
NAXDIN: Haweeney Ka Sheekeeysay Sida Ay Mas U Naas Nuujisay
Sagaalkaan Calaamadood Hadaad Ninka Ku Aragto Waa Ku Jecelyahay
8 Siyaabood Oo Gacalisadaada Aad Ugu Sheegeyso Inaad Jacayl Waali Ah U Qabto